local server problem - MYSTERY ZILLION
April 2009 edited April 2009 in PHP
MZ မှာ မမေးရတာတော်တော် ကြာနေပြီ။ အခုမေးတာကိုဖြေပေးပါဦးနော်။
php နဲ့ရေးထားတာ ကို internat မှာသုံးချင်လို့ပါ။
mysql ပါပါတယ်။ wamp server ကိုသုံးထားပါတယ်။ server ကို share လုပ်လို့ရလားမသိဘူး။
nwe wrote: »
you need to enter in the URL bar the ip of your installed wamp server computer's. for example- (192.168.0.1\_sample\_index.php) something like that.
တခြားစက်ကနေ ခေါ်ချင်တာ ။ ခေါ်လို့ မရဘူး။ လုပ်ချင်တာက internet မှာသုံးသလို inrternat မှာသုံးချင်တာ။ သုံးလို့ရလား၊:77::77:
local network ထဲမှာကို ဆိုလိုချင်တာလို့ယူဆပါတယ်။ ရပါတယ်။ IP ကို Ping လို့ရရင် HTTP လဲရမှာပါ။ Network မှာ special restriction တွေမရှိဖူးဆိုရင်ပေါ့။
It's work well in your LAN & your work-group.But if u call from other clients u need to enter the ip of srever machine no need to enter (localhost).
for example :In the server computer ==> http:\_\_localhost\_sample\_index.php
from the other ==>http:\_\_server M/C ip just like (192.168.0.1)\_sample\_index.php
now u can see ur project.:6::6::6:
lan ထဲမှာ wamp server ကို တခြားစက်ကနေ ခေါ်ရင် အခက်အခဲ ရှိပါတယ်။ Easy wamp (သို့) xampp ကို သုံးလိုက်ပါ အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်...
အင်တာနက်မှာ တင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ web hosting တစ်ခုခုမှာ တင်လိုက်ပါ။
e.g-www.000webhost.com မှာ တင်ပြီး စမ်းလို့ ရပါတယ်....
ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ....xampp အသုံးပြုရတာ ပိုပြီးကောင်း ပါတယ်....ဒါပေမဲ့ ကို့ project သွားထည့်ရမဲ့ နေရာကတော့မတူ တော့ဘူးနော်...wamp မှာ www ဖြစ်ပေမဲ့ xampp မှာ htdocs ပါခင်ဗျာ...... xampp lite ကို ဒီမှာ ယူပါခင်ဗျာ...
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ mz ကအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ စမ်းကြည့်လိုက်ဦးမယ်။မရရင်ပြန်မေးဦးမယ်နော်။:d
XAMPP မှာတော့ folder ထည့်ပြီးပြီ။ localhost မှာ တော့သုံးလို့ရပြီ။
တခြားစက်ကနေ ip address ရိုက်ပြီး ခေါ်တာမရသေးဘူးဖြစ်နေတယ်။
ip ping နည်းပါသင်ပေးပါဦးနော်။ LAN ထဲမှာ login ၀င်ရတဲ့ site လုပ်ချင်တာပါ။ တကယ်လို့ login အတူတူ၀င်ရင် ပထမလူ၀င်ထား တဲ့နေရာက၀င်နေမလား။ home page ကနေပဲစ၀င်မှာလား။
ဖြေပေးပါဦးနော်။ အားလုံး ပြိုင်သုံးလို့ရပါ့မလား။:((:((:((
localhost နေရာ မှာ ip ထဲ့ပြီးခေါ်ရုံပဲလေ...ရမှာပါ တစ်ချက်လောက်စမ်းကြည့်ပါဦး...လူတွေအများ ကြီးတစ်ပြိုင်နက် တစ်ခုထဲကိုဝိုင်းဖွင်း ရင်တော့နဲနဲလေးသွားမယ်ထင်ပါတယ်....ကျတော် သုံးတုန်းက နှစ်လုံး , သုံးလုံးလောက်က ခေါ်တာတော့ အစဉ်ပြေပါတယ် ....တအားမလေးပါဘူး.....တစ်ချက်လောက် ပြန်စမ်းကြည့်ပါဦးဗျာရမှာပါ.... localhost မှာပြေ ရင် LAN ထဲမှာလဲရပါတယ်....:6::6::6:
xampp lite နဲ့မသုံးနဲ့နော်.. ရိုးရိုး Xampp installer ကိုသုံးနော်.. xampp lite က portable အတွက်ပဲ ထုတ်ထားတာ.. feature တွေက မစုံဘူး... ping ကတော့ cmd မှာ
ဆိုရင် reply တွေ လာပါလိမ့်မယ်။
ခေါ်လို့ရသွားပြီ။ XAMPPlite ပဲသုံး လိုက်မိတယ် ကိုစေတန်ရေ။ အခုလောလောဆယ်တော့ အဆင်ပြေနေသေးတယ်။ ဘယ်လို error တွေလာနိုင်လဲမသိဘူးနော်။ data တွေကို server စက်မှာပဲ သိမ်းပေးထားမှာလား။ စက်အရမ်းလေးသွားမလားပဲနော်။
ကျတော်ကအစမ်းသဘောအနေနဲ့.. xampplite ကိုပေးလိုက်တာပါ.... မစုံပေမဲ့ တော်တော်လေးကောင်းပါတယ်.... တခြားစက်ကခေါ်တာသာ လေးသွားနိုင်တာပါ စက်ကတော့ ပုံမှန်ပါပဲခင်ဗျာ........ ပိုကောင်းချင်ရင်တော့ lite ကိုမသုံးပဲ xampp ရိုးရိုးကိုသာသုံးပါ... (ကိုစေတန်ပြောသလို) ဒါပေမဲ့ ..lite လေးက မန်မိုရီစတစ် ထဲပါယူသွားလို့ရ တဲ့အတွက် ကျတော်ကတော့ပိုကြိုက်တယ်.... စုံအောင်သုံးစရာလဲမလိုသေးလို့..ဟီး......:6::6::6: